Degso Communication Barnaamijyada loogu talagalay Windows
Degso Communication Barnaamijyada
Zoom waa codsi Windows ah oo aad ugu biiri karto wada sheekaysiga fiidiyowga qaab fudud, kaasoo guud ahaan la isticmaalo inta lagu jiro waxbarashada masaafada oo leh astaamo waxtar leh oo bixiya taageerada luuqadda Turkiga. Sidee loo sameeyaa wicitaan fiidiyoow ah? Kadib markaan soo degsano barnaamijka Zoom, waxaan ku galnaa adigoo...
Khilaafka waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay cod, qoraal iyo barnaamij sheekeysi fiidiyow ah oo lagu sameeyay iyadoo la tixgelinayo baahiyaha ciyaartoyda. Discord, barnaamijka isgaarsiinta ee ugu caansan oo ay door bidaan ciyaartoy in ka badan 100 milyan oo isticmaalayaal bille ah, 13.5 milyan oo toddobaadle ah oo firfircoon, iyo 4 bilyan...
BiP Messenger waa fariin deg deg ah oo Turkcell iyo codsi fiidiyoow ah oo fiidiyow ah oo loo adeegsan karo aaladaha mobilada (Android iyo iOS), daalacashada shabakadaha iyo desktop (kumbuyuutarrada Windows iyo Mac) Dhagsii badhanka BiP Desktop-ka ee kor ku xusan si aad ugu adeegsato kombuyuutarkaaga BiP Messenger, oo ah adeeg fariin...
Barnaamijka farriinta moobiilka ee caanka ah Viber ayaa hadda laga heli karaa Windows-ka. Waad ku mahadsan tahay barnaamijka Viber Windows, waxaad awoodi doontaa inaad farriin iyo wicitaanno telefoon kula dirto isticmaaleyaasha Viber ee liiskaaga si bilaash ah. Barnaamijka Viber Windows wuxuu si otomaatig ah u waafajiyaa xiriirada,...
Waa Maxay Skype, Ma La Bixiyaa? Skype waa mid ka mid ah barnaamijyada fiidiyowga lagu sheekeysto ee bilaashka ah iyo farriimaha farriimaha adduunka oo dhan ay adeegsadaan kombiyuutarrada iyo kuwa casriga ah. Barnaamijka kuu ogolaanaya inaad qoraal, ku hadasho ama ku sheekaysato fiidiyoow bilaash ah adoo adeegsanaya internetka, waxaad...
Barnaamijka wada-hadalka lagu kalsoon yahay ee ICQ ayaa dib ugu soo noqday ajandaha iyadoo ay la socoto nooc cusub oo ah ICQ 8. Barnaamijka farriinta, oo mar kale lagu caddeeyay is dhexgalka cusub iyo astaamaha cusub, ayaa muuqaal ahaan isu keenay xaalad cusub. Qaabkan ugu dambeeyay, oo ku qalabeysan runti noocyo cusub sida tab ka mid ah...
Thanks to nooca desktop-ka ee LINE, oo ah codsi fariin moobiil ah, waxaad kula xiriiri kartaa koontadaada LINE kombiyuutarkaaga. LINE, oo kuu oggolaaneysa inaad fariin u dirto asxaabtaada iyo xubnaha qoyskaaga, waxaa ku jira in ka badan 250 istiikirrada asalka ah iyo muuqaalka wajiga ee aad isticmaali karto intaad farriin dirayso. ...
Twitch waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay barnaamijka rasmiga ah ee loo yaqaan Twitch desktop desktop kaas oo ujeedkiisu yahay inuu isu keeno dhamaanba meelaha aad kahesho Twitch, asxaabtaada iyo ciyaaraha. Codsiga Twitch Desktop Application oo ah barnaamij aad ka soo dejisan karto una isticmaali karto gebi ahaanba bilaash...
TeamSpeak 3 waa barnaamij si weyn caan u ah gaar ahaan ciyaartooyda wuxuuna noo ogolaanayaa inaan si wada jir ah ugu wada hadalno codka. Waxaan ka fikiri karnaa jiilka seddexaad ee barnaamijka sidii barnaamij gebi ahaanba dib loogu qoro C ++ halkii aan ka badali lahayn nooca la xoojiyay ee TeamSpeak Classic iyo TeamSpeak 2. Barnaamijka,...
Yahoo! Mail waa codsiga emailka Yahoo ee loogu talagalay Windows 10 isticmaaleyaasha kombiyuutarka iyo kiniiniga. Waxaan dhihi karnaa in codsiga boostada, oo isku dhafan astaamaha caanka ah ee Windows 10, uu ka muuqdo barnaamijka webka marka la eego isdhexgalka iyo adeegsiga. Codsiga waraaqaha casriga ah ee horay loogu soo raray Windows...
Facebook Messenger ee Windows, barnaamijka farriinta ee ay diyaarisay Facebook, ayaa loo soo bandhigay dadka isticmaala Windows 10. Isdhexgalka arjiga, oo suurta gelinaya inaad la sheekaysatid asxaabtaada adigoon aadin bogga Facebook, wuxuu u eg yahay barnaamijyada lagu sheekeysto ee lagu bartay. Barnaamijka, waxaad farriin ugu diri...
Yahoo Messenger waa adeeg bilaash ah oo aad si dhakhso ah farriimaha ugala diri karto saaxiibbadaada khadka tooska ah. Barnaamijkan aad ku isticmaasho koontadaada Yahoo, emayl, iwm. Waxay sidoo kale kaa wargelinaysaa waxyaabaha ku cusub adeegyada kale. Astaamaha sida jawiga wada hadalka aaminka ah ee leh taageerada gidaarka, duubista iyo...
Trillian, waa mid kamid ah barnaamijyada ugu dhameystiran ee aad ku maamuli karto adeegyada fariimaha deg dega ah iyo astaamaha shabakada bulshada ee aag kaliya, waa ikhtiyaar u gaar ah oo lashaqeeya barnaamijyada Windows, Mac, Web iyo Mobile. Barnaamijka, oo aan ku garanaynay sidii Trillian Astra noocyadi hore, wuxuu bilaabay inuu...
Hangouts Chat waa barxadda fariimaha Google ee kooxaha. Codsiga, oo soo jiitay dareenka la midka ah Goobta Shaqada ee Facebook, Microsoft Teams, iyo Slack, ayaa u fududeyneysa dadka adeegsada ganacsiga inay wada xiriiraan. Codsi ganacsi oo si fudud loo adeegsan karo oo leh bots smart oo aad la wadaagi karto dukumiintiyada, waraaqaha,...